Kulanka Golaha Shacabka ee maanta oo baaqday – Kalfadhi
Kulanka Golaha Shacabka ayaa warar ay heleyso Kalfadhi waxa ay sheegayaan inuu maanta baaqday. Ma cadda, mana oga Xildhibaanadu sababta uu kulankaas u baaqday, sida ay qaarkood u sheegeen Kalfadhi. Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa, oo ka mid ah Xildhibaanada uu Kalfadhi wax ka weydiiyey arrinkan ayaa sheegay in marka uu kulan jiro fariintii loo soo diri jiray aysan u soo dhicin ilaa saaka, taas oo uu sheegay in marka ay dhacdo ay u badan tahay inuusan kulan Goluhu leeyahay jirin maalinkaas.
Kulanka Golaha ee maanta ayaa lagu waday, sida ay Xildhibaanada qaar ay u sheegeen Kalfadhi, in lagu hor keeno Golaha Hindise Sharciyeedka Xafiiska Hanti-Dhawrka Guud ee Qaranka iyo Hindisaha Xeerka Liil-Tirka Xaqa Siyaasiinta Dowladda Federalka Soomaaliya (DFS), oo labaduba maraya heerkoodii ugu dambeeyey.
Inkasta oo aysan Golaha iyo Shir-Guddoonkooduba wali go’aamin waqtiga dhameystirka Xeerka Liil-Tirka Xaqa Siyaasiinta DFS, haddana waxa uu kulankii ugu dambeeyey ee uu yeesho kii ka horeeyey uu Shir-Guddoonkiisu sheegay in Hindise Sharciyeedka Xafiiska Hanti-Dhawrka Guud ee Qaranka lagu ansixinayo kukanka 24-kii bishan, waqtiga ayaana ka dhamaaday, markii inta badan ay qaadatay dooddii Miisaaniyadda 2018-ka.
Hadal-Jeedintii Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Kulankii Sabtida